Derecho kunye neDerecha, amazwi amabini aseSpain adibanisa
'Derecho' kunye 'neDerecha'
Amazwi afanayo angenza Udibanise
Amagama amabini aseSpain adideke ngokulula ayenayo kwaye adibanise . Bobabini ngabazala basemagunyeni asemaNgesi athi "okulungileyo" kunye "ngqo," kwaye yinto eyimvelaphi yokudideka: Ngokuxhomekeke kumongo kunye nokusetyenziswa, la magama angakwazi ukuthwala intsingiselo efana ne "ilungelo" (ngokuchasene nekhohlo), " ngileyo "(ilungelo)," ngokuchanekileyo, "" ngokuthe tye "kunye" ngokuthe ngqo. "
La magama alula kakhulu ukuqonda njengezibizo:
U-El derecho akasoze waba lixesha lolawulo kwaye usetyenziselwa ukubhekisela kwinto emele umntu ngokomthetho, umgaqo wokuziphatha okanye isiko - ngamanye amagama, ilungelo. Xa lisetyenziswe ngobuninzi, ngokubhekiselele lithetha "amalungelo" njengelinye ibinzana elichasayo abantu, amalungelo abantu. Inokuthi ibhekiselele kulona hlobo "olungileyo" olungabonakaliyo. Ngokomzekelo, i- derechos del autor (ngokoqobo, amalungelo omlobi) ibhekisela kwimirhumo.
I-derecha ibhekisela kwinto ekunene (ecaleni kwesobunxele) kwicala. Ingabhekisela kuye, umzekelo, isandla sokunene kunye nepolitiki. Ibinzana elikhangelekileyo le larecha liqhelekileyo kwaye lithetha "ngakwesokudla" okanye "ngakwesokudla."
Njengesigxina, i- derecho (kunye neefomu ezivela kwi- derecha , derechos kunye ne- derechas ) zinokuthi "okulungileyo" (ngokuchaseneyo ngakwesobunxele, njengokuba el lado derecho , ngakwesokudla), "othe tye" (njengelinye i- palo derecho , iqhosha elithe tye ) kunye "ngokuchanekileyo" (njengendlela ye- derecha , umugca ochanekileyo). Ngokuqhelekileyo imeko iya kwenza ukuba intsingiselo icace. Ngaphandle kweSpanglish embi, i- derecho njengesiphakamiso ayithethi "ukuchaneka."
Njenge- adverb , ifom iyachithwa . Ngokuqhelekileyo lithetha "ngqo ngqo" okanye "kumgca ochanekileyo" njengoko ku- anduvieron derecho , bahamba phambili ngqo.
Nantsi imimiselo yamagama asetyenziswayo:
Akukho zixhobo ze-in-the-third-party ezilandelayo, i-libertad, o propiedad de otros. (Awunalo ilungelo lokuqalisa ukusebenzisa amandla kubomi, inkululeko okanye impahla yabanye.)
I-Estos cambios pueden tener un impacto negativo contra los derechos al voto de minorías raciales. (Olu tshintsho lunokuthi lube nemiphumo emibi malunga namalungelo okuvota amancinci.)
I-Queremos i-decidir para toda la gente. (Sifuna ilungelo lokuthatha isigqibo kubo bonke abantu.)
I-Como isilungelelaniso se-este incidente ngokufakela i-herida ingcwaba e-ojo derecho . (Ngenxa yeso siganeko wabulala kakhulu kwiso lakhe lasekunene.)
El coche es caro, pero no me funciona la luz de cruce derecha . (Imoto iyabiza, kodwa uphawu lokujika olufanelekileyo alusebenzi kum.)
Siguió derecho por tiempo antes de que parara. (Waqhubeka ngokuthe ngqo phambi kwexesha elithile ngaphambi kokuba ayeke.)
Nunca yena ungancibilikisa ukuba udibanise i- derechas . (Andizange ndikhanyele ukuba kukho iintlobo ezahlukeneyo zokugcina.)
I-Espero que la pared de la cocina esté derecha . (Ndiyathemba ukuba udonga lwekhitshi luye lwahla ngqo naphantsi.)
Gire i la derecha dede la rampa de salida. (Jikela ngakwesokudla ukusuka kwinqanaba lokuphuma.)
I-tradición el águila de la bandera mira i la derecha . (Ngokwesiko, ukhozi kwiflegi ibheke ngakwesokudla.)
Ukuba Kufuneka Uthi 'Ukushiya'
Ingaba ubhekiselele kwinqununu yomzimba okanye kwezopolitiko, igama lebizo elisekhohlo li- izquierda . Ifom yefom yesipelithi iyquierdo kunye nokuhluka kwayo kwenani kunye nesini.
I-Zurdo isichazi esivame ukusetyenziswa ukubhekisela kumntu osisandleni esisekhohlo.
Ezinye izivakalisi zesampula:
I-Sufro de constante inflamación e-ojo izquierdo . (Ndihlala ndihlanjululwa ngesohlwayo kwiso lam ngasekhohlo.)
I-dice ye-unice-de-chasquierda e-intanethi ye-buscar unama-door distribución de las riquezas. (Bathi iphathi ivela ngakwesobunxele xa ithambekele ekuqhubekeni ukusabalalisa ubutyebi.)
Qhawula umfanekiso we-imeyli ye-rotación del planeta. (Umfanekiso ngakwesobunxele ubonisa ukujikeleza kweplanethi.)
I-design fayile ifanatha kwi- intanethi . (Wayebizwa ngokuba ngumdlali we-best-handed player).
Iimpapasho zesiFrentshi ngeChose
Funda igama lesiJapan elithi Jitsuwa
Imifanekiso yokuLawula ukutya
Konke malunga neJapan Word Sate
Indlela Yokwenza Umzekelo Wokulinganisela Ukusekwa Kwezakhiwo
Ukuhlola kuqala: iBridgestone Blizzak DM-V2
Iimpawu ezikhuselekileyo zokukhuselwa koMkhukula Wonke umntu kufuneka azi
Ngo-1953 - 1956 I-F-100 iColpor Trucks